(Dhageyso+Sawirro) MW Deni Oo Ku Dhawaaqay Wasiirradiisa Cusub
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay magaalada Garoowe kaga dhawaaqay Golihiisa Wasiirrada oo maalmahan laga sugayay.
Xukuumadda uu soo dhisay madaxweynaha oo ka kooban Wasiirro, Wasiir kuxigeenno iyo Wasiiru dowlayaal, waxaana wadarta guud ee xukuumadda Puntland ay noqonaysa haddii baarlamaanka ay meelmariyaan 45 wasiir, waxaana haween ka ah oo kaliya 3 qof, iyadoo magacaabidan aheyd mid lagu saleeyay hab qeybsiga beelaha dega degaannada Puntland, oo ku mideysan dhismaha dowlad goboleedkaasi.
Golaha Wasiirrada Puntland ayaa ka kooban 18 wasiir, 18 wasiir ku xigeen iyo 9 wasiir dowle, waxaana badi ay yihiin wajiyaal cusub xukuumaddani oo noqonaysa tii ugu horreeysay ee uu soo magacaabo Deni tan iyo markii uu xafiiska yimid.
Xubnaha Golaha Wasiirada ayaa waxaa ka soo dhex muuqday qaar kamid ah Musharaxiintii isku soo sharaxday xilka Madaxweynaha Puntland ee ka qeyb galay doorashadii madaxtinimo ee magaalada Garoowe ka qabsoontay 8-da bishii la soo dhaafay ee sanadkani 2019-ka.
Magacaabista Golaha Wasiirrada oo laga baahiyay Telefishinka Puntland, ayaa masuuliyiinta ka soo muuqday waxaa kamid ah Cabdisamad Maxamed Gallan oo loo magacaabay wasiirka amniga.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni, ayaa magacaabista xukuumaddiisa cusub wuxuu u cuskaday qodobo kamid ah dastuurka sida qodobka 80-aad, farqadiisa 5-aad, markuu la tashaday madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo qodobo kale oo uu soo garawsaday ayuu madaxweynuhu xeeriyay magacaabidda xubnahani cusub, sida uu shaaca ka qaaday agaasimaha guud ee Talefishinka Puntland Jamaal Carab Yuusuf.
Magacyada Wasiirada Cusub
Wasiir kub xigeennada: